Namporisika ny Airlines hanome famerenam-bola, hanitatra ny fe-potoana fampandrenesana ny sidina voafafa amin'ny areti-mandringana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Namporisika ny Airlines hanome famerenam-bola, hanitatra ny fe-potoana fampandrenesana ny sidina voafafa amin'ny areti-mandringana
Amerikanina an-tapitrisany izay namandrika sidina tamim-pahatokisana tamin'ny taona 2020 no voasakana tsy hisidina noho ny fanidiana ny governemanta sy ny olana ara-piarovana nateraky ny areti-mandringana eran-tany tamin'ny taonjato iray.
Ny Consumer Reports sy ny PIRG dia manentana ireo seranam-piaramanidina hanome famerenam-bola feno ho an'ny sidina nofoanana nandritra ny areti-mandringana satria efa antomotra ny daty famaranana ny voucher
Miantso ny zotram-piaramanidina ireo vondrona mba hanitatra ny daty lany daty amin'ny faran'ny 2022 farafaharatsiny
Ny taratasin'ireo vondrona mpanjifa dia nanamarika fa ny fitarainana tany amin'ny Departemantan'ny fitaterana amerikana momba ny famerenam-bola an'habakabaka dia nitsambikina be nandritra ny taona lasa
Nandritra ny herintaona nisian'ny fanidiana COVID-19 nanerana ny firenena, ny Consumer Reports sy ny US PIRG dia nandefa taratasy tany amin'ireo kaompaniam-pitaterana an-trano folo androany niantsoana azy ireo hanome vola feno ho an'ireo mpanjifa izay nofoanana na voan'ny areti-mandringana ny sidiny. Farafaharatsiny farafaharatsiny, ny vondrona mpanjifa dia manentana ireo kaompaniam-pitaterana mba hanitatra ny daty lany daty ho an'ireo voucher izay navoakan'izy ireo ho an'ny sidina nofoanana hatramin'ny faran'ny 2022 na mihoatra.
"Amerikanina an-tapitrisany izay namandrika sidina tamim-pahatokisana tamin'ny taona 2020 no voasakana tsy hisidina noho ny fanidiana ny governemanta sy ny olana ara-piarovana nateraky ny areti-mandringana eran-taona iray," hoy i William J. McGee, mpanolotsaina momba ny fiaramanidina Consumer Reports. “Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nahazo fanampiana be dia be avy amin'ireo mpandoa hetra raha toa ka miady mafy amin'ny mpanjifany sy mandray ny vola azony mafy toy ny indram-bola tsy misy zana-bola. Fotoana izao hanomezana ny mpanjifa ny famerenam-bola efa ela izay tokony ho azy ireo. ”
Ny taratasin'ireo vondrona mpanjifa dia nanamarika fa ny fitarainana tany amin'ny Departemantan'ny fitaterana amerikana momba ny famerenam-bola an'habakabaka dia nitsambikina be nandritra ny taona lasa. Tamin'ny taona 2019, 1,574 ny fitarainan'ny mpanjifa momba ny famerenam-bola amin'ny DOT. Tamin'ny taon-dasa, io isa io dia nitombo 57 heny hatramin'ny 89,518 fitarainana.
Ny Consumer Reports dia nifandray tamina mpanjifa marobe fa sosotra izy ireo satria tsy afaka mahazo tamberina mandritra ny lockdowns ary iza no miahiahy sao tsy afaka mivezivezy alohan'ny hahatongavan'ny voucher. Ny fanadihadiana nataon'ny TripAction, orinasam-pitaterana fitetezam-paritra ho an'ny orinasa dia nahitana fa 55 isan-jaton'ny tapakila ho an'ny tapakila tsy ampiasaina dia tapitra amin'ny 2021, ary 45 isan-jato no ho tapitra amin'ny 2022.
Mpandeha maro no voasakana tsy hisidina noho ny fameperana ataon'ny governemanta, ny fampandrenesana momba ny fahasalamam-bahoaka, na ny toe-pahasalamana lehibe izay nahatonga ny sidina nandritra ny areti-mandringana tsy azo antoka. Betsaka loatra ireo dia notanany tsy ho tonga mihitsy, noho ny fanafoanana (tsy fanemorana) ny fihaonambe, ny fivoriambe, ny mariazy, ny fizarana diplaoma ary ny fivorian'ny fianakaviana.
Raha ny mpandeha amin'ny sidina nofoanan'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia manan-karama amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka araka ny lalàna federaly, fanadihadiana iray natao tamin'ny kongresy no nahitana fa nisy mpitatitra nanolotra voucher ho toy ny safidy default, mitaky ny mpandeha handray fepetra fanampiny hahazoana famerenana vola. Orinasa maro no niandry hatramin'ny ora farany mba hanafoanana ny sidina voatondro, nahatonga ireo mpandeha niahiahy hanafoana ny tapakilan'izy ireo ary hamoy ny zony ara-dalàna hahazo famerenam-bola.
“Maniratsira sy tsy ara-drariny fa tsy nanolotra famerenam-bola ho an'ny mpanjifa tratry ny areti-mandringana ny seranam-piaramanidina”, hoy i Teresa Murray, talen'ny Consumer Watchdog an'ny US PIRG. “Azo antoka fa tsy ho hitan'ny mpanjifa ny krizy eran'izao tontolo izao indray mandeha. Nasehon'ny fikarohana nataonay fa ireo mpitsangatsangana izay nofoanana ny fikasan'izy ireo dia tsy maintsy mandeha amin'ny alàlan'ny politika famerenam-bola mety nosoratan'ny ekipa mpisolovava iray. Izy ireo dia miatrika ny fahitana ny maha samy hafa ny trosan'ny sidina na ny carte de voyage na ny voucher de voyage ary ny tolotra mitovy amin'izany azon'ireo kaompaniam-pitaterana mba hialana amin'ny fanomezana vola mora takatry ny olona any am-paosiny. ”
Ny fanadihadian'ny Consumer Reports momba ny politikan'ny voucher airline dia nahitana politikany sivy isan-karazany teo amin'ireo seranam-piaramanidina folo samy hafa. Betsaka amin'ireto politika ireto no sarotra hita amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina, ary ny filazalazan'ny zotram-piaramanidina momba ny politikany dia mety hampikorontana ary indraindray mifanohitra, mifototra amin'ny lalàna mifanohitra amin'ny daty famandrihana, fitsangatsanganana ary fanafoanana isan-karazany.
Ny taratasin'ireto vondrona mpanjifa ireto dia nalefa tany amin'ny CEO an'ny zotram-piaramanidina manaraka ireto: Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines, ary United Airlines.